Umsebenzi Kahulumeni E-Dubai Thola Imisebenzi Kahulumeni e-UAE 🥇
Umsebenzi Kahulumeni eDubai Okwenzelwe Izindleko
Imisebenzi ye Pakistani e-UAE ⭐⭐⭐⭐⭐
Imisebenzi eSaudi Arabia - Uhlu lwezinkampani e-Kingdom Saudi Arabia
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at December 17, 2017
Umsebenzi weHulumeni e-Dubai
Uhulumeni Umsebenzi eDubai, So you are ufuna umsebenzi eDubai City?. Indlela enhle ukuxoxa neqembu lethu, Inkampani yethu yinkampani ekhula ngokushesha eMiddle East. Singa ukusiza abaphathi ukuthola umsebenzi omusha eDubai. You can find many hiring recruiters in Dubai. If you are looking for a job from India and Pakistan. Our company is a proper way to find a umsebenzi in UAE. The career in Dubai City has many good izindlela zokuthola umsebenzi e-United Arab Emirates.
Siza abafuna umsebenzi ukuba bathole umsebenzi weHulumeni eDaily. Ngakolunye uhlangothi, ungenza umsebenzi wokusesha nge uhlelo oluphelele lokuvakashela i-visa yokufunda nentuthuko ngaphakathi kwezinkampani zoHulumeni. Indlela enhle yokusheshisa inqubo ukubheka eyethu Imininingwane yokushintsha umdlalo weDubai. Ngakho-ke, ungathola umsebenzi ezinkampanini zikaHulumeni waseDubai.
Imisebenzi kahulumeni e-Dubai
Izinkampani ezihamba phambili ku-UAE Worth of Applying !.
Imisebenzi ku Izinkampani eziHulumeni e-United Arab Emirates.
Izinkampanini Ezinhle Zikahulumeni Zokusebenzela E-Dubai!
Imisebenzi e-International Petroleum Investment Company
I-International Petroleum Investment Company (IPIC) njengoba kunjalo le nkampani yasungulwa nguHulumeni wase-Abu Dhabi. Ngaphezu kwalokho, inkampani ithandwa kakhulu embonini yamafutha. Futhi, inkampani ichaze lokhu amazing Dubai inkampani eya ku-Emiri Isimemezelo e1984. Ngethokheni efanayo i-IPIC igunyaza ukutshala imali ekutshaleleni izwe lonke i-Middle East emakethe yezimboni ezihlobene namandla nezamandla.
Nakuba lokhu kungaba yiqiniso izinkampani zikaHulumeni e-UAE. Ezinye izinkampani inkampani inomnikazi we-100% wamasheya ezimakethe ze-IPIC. Ngakolunye uhlangothi, inkampani ikhetha konke amalungu e-Dubai futhi u-Abu Dhabi webhodi labaqondisi bakhe abafuna ukukhula ku-IPIC. Eminyakeni engamakhulu eminyaka, ngesikhathi esifanayo, i-IPIC isekelwe yimikhiqizo yamasheya emasheya evela kuHulumeni wase-Abu Dhabi.
Yize le kungenzeka kube yinkampani eyiqiniso manje esenegama manje elithi MUBADALA. Ngaleso sikhathi inkampani, yiba nemiphakathi eminingi yabasebenzi abafunela amakhono. Manje sebethola umsebenzi eMubadala. Ngale nhloso, inkampani inesipiliyoni esihle kunazo zonke nge-International Petroleum Investment. Ngenhloso ye ukukhula emakethe yokutshala imali eDubai. Abaphathi nabasebenzi abaphethe uhambo lomsebenzi. Ukubeka ngenye indlela, isikhathi osichitha nenkampani sizokuvumela ukukhula kuzo zonke izinkampani nenkampani. Thola kabanzi mayelana nokuthi yini efana nokuqala inkampani yePetroleum kanye nokutshalwa kwezimali njengoMudala.
Government Career in Dubai – Layisha Qalisa Yakho to Mubadala.
Imisebenzi e-Abu Dhabi Investment Council
Okubalulekile ukuqaphela i-Abu Dhabi Investment Council yinkampani encane ekhulayo eMpumalanga Ephakathi. Into yokuqala yokukhumbula ukuthi i-Abu Dhabi Investment Council izoba yinye inkampani engcono kakhulu futhi ephakanyisiwe e-2019. Kukho konke lokhu kusho ukuthi inkampani ihola inhlangano yokutshalwa kwezimali hhayi e-Abu Dhabi kuphela kodwa nasemhlabeni jikelele. Ubufakazi obuqand 'ikhanda bokuthi uyakwazi ukuthola umsebenzi nabo kuphela ngemizamo ehlangene lapho ubhala i-CV. Ngasohlangothini oluhle for expat ngamunye ofuna umsebenzi. Kuzo zonke izikhalazo ezintsha, abasebenzi bazo bazokusiza ukuba ufeze yonke imigomo.
Qala ukwakha umsebenzi wakho e-Abu Dhabi
Eqinisweni, inkampani iqeqesha futhi yathuthukise. Wonke umuntu omusha ozongena ube yithalente elibalulekile eMiddle East.
Ngokuvamile, i-Abu Dhabi Investment Council Ukuphatha kanye nokuvuza okunikezayo. Iminikelo ngayinye yemisebenzi ephumelelayo eMkhandlwini.
Isibonelo, inkampani ikholelwa ukuthi ukuxhumana emisebenzini ngaphakathi kwabaphathi nabasebenzi kufanele ngaso sonke isikhathi vula okuvulelwe okuvela eNdiya.
Ukugcizelela isiko lenkampani yindlela enhle kakhulu egcizelela izinsiza zokubonisana e-Dubai.
The first thing to remember, competency, management integrity and career ambition. Is a key value that iziqondiso new candidates for the everyday task.
Ukukhomba i-Abu Dhabi Investment ukudala i imvelo emangalisayo yabafuna umsebenzi. Unalokhu engqondweni, le nkampani iyamangaza iyalwa futhi abafuna imisebenzi emisha nge-MBA. Ngemva kwakho konke, Indian expats and other Asian people. Advising to join this company as a new candidate. Ngokuvumelana nale nhlangano, ungakhula. Empeleni, imisebenzi ene-Abu Dhabi Investment Council, inkampani ikholelwa ukuthi izisebenzi hhayi abaphathi nje. Yize lokhu kungenzeka inkampani yangempela yobuchwepheshe kwabathuthukisi. Kanye nezinye izinkampani zezokutshalwa kwezimali, izinhloso zemisebenzi emikhulu zingatholakala.
Umsebenzi e-Abu Dhabi Ports Company
Empeleni, i-Abu Dhabi Ports iyinkampani ehamba phambili. Ngokuhambisana namahhovisi ambalwa eDubai ungasebenza nawo. Ukusho lutho nge-Abu Dhabi izikhundla zohlelo lokuthuthukiswa kwamachweba. Kukhanya umsebenzi enkampanini ye-Emirates is always on the lookout ukuthengiswa okusha candidates. On the negative side, there are so many seasoned professionals to joining their team. So it is not so easy to start a quick umsebenzi ngebhizinisi le-Abu Dhabi.
Abathuthukisi abasha kule nkampani bayamukelwa, inkampani inokuhle kakhulu imisebenzi yabaphothule ekolishi naseyunivesithi e-Abu Dhabi, i-Career ethekwini ibiyaziwa iminyaka eminingi enhliziyweni ye-Abu Dhabi. Wonke umuntu okhethwayo kufanele akhunjulwe ukuthi isiko lokugcina amachweba njengoba i-2010 ingenye ehamba phambili ekilasini. Uhlelo lwezifundo zabafundi iyaqhubeka nokuqasha abathuthukisi bephrojekthi ngokubhekisisa izindima zobuchwepheshe e-Abu Dhabi.
Into emangazayo eyamukela ubuzwe nokudluliselwa e-Abu Dhabi. Ingabe ulwela isiko lokuqina le-Emirates nomoya weqembu kanye nentshisekelo ye-Middle East. Unalokhu engqondweni ukusebenza kokuziphatha kuyisihluthulelo sokuthola umsebenzi. Endaweni eshesha futhi enobungane phakathi eMiddle East futhi ikakhulukazi emakethe yomsebenzi i-Abu Dhabi. Ukucacisa ukunikezwa okuyisisekelo kwenza uhlelo oluhle lokuvuza luqinisekise ukuhola okuhle. Kuyamangaza ukuthi ukuqashwa enkampanini kuwukuthokoza kwawo wonke amalungu eqembu lethu azobajoyina.
Umsebenzi weHulumeni e-Dubai. Uyacelwa ukuba ujoyine Amachweba we-Abu Dhabi inhlangano yezikhala zamanje.
Umsebenzi e-Abu Dhabi Terminals (ADT)
Ukuqiniseka ukuthi i-Abu Dhabi Terminals (ADT) ikhona amathuba emisebenzi emangalisayo. Isibonelo inkampani yamachweba ilawula futhi isebenzise abaphathi beKalifa Port nabaphathi bakwa-HR ukuqasha amathuba we-Container terminal career. Ngaphansi kwalezo zimo, i-Abu Dhabi Ports Company esebenza ngesinye sezikhungo ezithuthuke kakhulu kwezobuchwepheshe e-Emirates futhi ingenye yezindawo ezihamba phambili emhlabeni.
Ngalesi sizathu, itheku lavulwa ngokusemthethweni ngoDisemba 2012. Ngokujwayelekile, i-Abu Dhabi Port iyinkampani ezimele ye-Joint. Ngokuhamba kwesikhathi, lo Hulumeni ichweba liphethwe ngabaphathi abaphezulu be-Abu Dhabi and few others infrastructure partners from the I-United Arab Emirates.
I-Abu Dhabi Ports Company inikeza abasebenzi bayo ukufinyelela Enye yezimakethe ezikhula masinyane emhlabeni eMiddle East. Kunoma yikuphi, wonke umuntu osebenza nale nkampani uthola ukusebenza ubuhle e-UAE. Ngokuhambisana nale nkampani ethekwini, uzojoyina ingqalasizinda yezinketho zobuchwepheshe besizinda semigwaqo. Futhi, unga sebenze kule nkampani njengenkosikazi ye-expat.
Umsebenzi wezehulumeni e Dubai - Abu Phabi Ports Company.
Imisebenzi e-Abu Dhabi neNational Oil Company
I-National Oil Company inikeza amathuba amaningi emisebenzi ejabulisayo e-Abu Dhabi nase Dubai. Unikezwe la maphuzu, lokhu inkampani kahulumeni ehlinzeka ngemvelo enomvuzo emakethe yaseMpumalanga Ephakathi. Kunabantu abaningi kakhulu abahambahamba emhlabeni jikelele. Njengoba sekuphawulwe izinkampani zikazwelonke ze-Oyili eziqasha abaphathi abalinganiselwe nabantu ngabanye. Ngokuyinhloko, ungaqaphela amandla abo ngokusebenzisa kuwebhusayithi yabo. Ngokuvamile, ukuqala umsebenzi nabo kukusiza ukuba uhlele ikusasa emkhakheni wamandla e-Abu Dhabi.
Okwamanje inkampani esebenza ngokusekelwe ku-a uhlelo oluqhutshwa ukusebenza. Ngezikhathi ezithile ungathola izikhundla zenkampani nenkampani. Ngokusobala, ngoba inkampani iNational Amafutha itshala imali kubantu bayo. Kungekudala ukudala indawo yokusebenza enomvuzo ngaphakathi kule nkampani kuyindlela eya empumelelweni.
Ngaphambili, abantu abajoyina leyo nkampani ka-Oyili bayaziswa ngemibono yabo nangeminikelo. Ngesikhathi esifanayo, inkampani inikezwa ithuba lokubona amandla abo aphelele kulowo nalowo ofuna umsebenzi in Abu Dhabi. Up to the present time, the National Oil company expats people define our ibhizinisi. Given these points, expats iyisihluthulelo sempumelelo yethu kuleyo nkampani kawoyela. Ngokuvamile ukukhuluma ngemisebenzi ye-Abu Dhabi. I-Lets, ukubeka ngenye indlela, ukuthatha indlela yesikhathi eside yomsebenzi nale nhlangano e-Abu Dhabi ukuthuthukiswa e-UAE.
Umsebenzi Kahulumeni E Dubai - Layisha I-Resume Yakho ku-National Oil Company.
I-Arab Media Group e-United Arab Emirates
Into yokuqala okumele uyikhumbule lapho wenza ucwaningo ngomsebenzi i-Arab Media Group. Ukukhomba ukuthi kungani kufanele ufake isicelo nge-MBA. Ngoba ngaleli Media Group Company ungathola okunye okuhle kakhulu ukunikezwa komsebenzi eSifundazweni sase-Saudi Arabia. Kuleso simo ukuthola umsebenzi nenkampani yokuzijabulisa ehamba phambili. Ngubani okwamanje oqashelwe ukusakaza umsakazo e-United Arab Emirates? Inkampani ifuna amalungu abasebenzi abancane ekuphathweni kwemicimbi kanye nasemakethe yezokuzijabulisa yomndeni ngakho kungenye yezindlela ezinhle kakhulu zokuqala umsebenzi.
Ngenxa yalokho, i-Arab Media Group (AMG) yinhlangano eyaziwa kakhulu e-Dubai. Ubufakazi obunamandla obukhulu bokuthi i-Arab Media Group e-United Arab Emirates. Ingabe i-capital esekelwe emakethe yemasheya enamasheya ngaphakathi kwe-Dubai Holding. Ngoba i inkampani yokuzijabulisa ukwethula ibhizinisi elisha e-Emirates kungakufanele impela ukujoyina. Okwamanje banemisebenzi embalwa ayinikezwayo kuwebhusayithi.
Ngokuvamile, i-AMG ikhona ukubandakanya ukuqashwa kwamanye amazwe e-Dubai. Ngokwengxenye enkulu, le nkampani uNdunankulu ihlanganise uhlelo oluhle kakhulu lokuqashwa. Ukufingqa inkampani yokuzijabulisa kuhle uma ufuna umsebenzi wokumaketha eDubai. Ngokuqinisekile, ungathola amathuba wokuphatha ngaphakathi kwe-Global Village. Ekuhlaziyeni kokugcina, i-Arab Media Group yasungulwa ngoMashi 2005 ngakho-ke inebandla eliqinile eDubai. I-Arab Media Group e-United Arab Emirates inezimanga futhi izisebenzi ezinkulu kakhulu ongoti kwezentengiso eDubai.
Ngokufingqa isisebenzi senkampani esiphezulu abaphathi abalinganisiwe. Kuze kube sesikhathini samanje kwabasebenzi be-320. Iqashwe ngamanqamu amathathu wokumaketha emahhovisi ase Dubai. Umsebenzi weHulumeni eDaily - Layisha i-Resume yakho e-Dubai Airports.
Imisebenzi e-Daman umshuwalense kanye nezinkampani zokwelapha
Daman kuze kufike kulesikhathi samanje njalo ufuna ochwepheshe abaphakathi abafanelekayo abanolwazi. Ngaphandle kokulibala inkampani ifuna abagqokiwe abangama-inshurensi. Ku isikhungo semikhakha yezokwelapha, kufanele ufake isicelo sesikhundla nenkampani yomshuwalense yakwaDaman. Okwamanje, uma unesipiliyoni esihle ku-CV ungaba yilungu eliyilungelo lezinkundla ezijwayelekile zebhizinisi.
Daman company is a superb specialist in health insurance. You can easily use them simply by downloading a umakhala ekhukhwini application. To say nothing of ukuxhumana kukahulumeni company in Abu Dhabi so this organization is a safe company to work. As a matter of fact, Daman insurance started operations in May 2006. Most compelling evidence that is worth to work with them is that they have over 1100 employees. You can -Google for Michael Bitzer the CEO of Daman or try ukuxhumana nenkampani yakwa-Linkedin.
Esinye iphuzu eliyinhloko uDaman unikeza inqwaba yomshwalense wezempilo izikhundla phezu kweDaily City and Gulf. Ngenxa yalesi sizathu, lapho uqala ukusebenza nabo ungathola amasu amaholo amangalisayo ngamabhonasi angeziwe. Ngasohlangothini oluhle, inkampani ayinamkhawulo futhi ibekiwe kabanzi ngokwendawo ngakho-ke awukwazi ukusebenza e-UAE kuphela.
Umsebenzi Kahulumeni E-Dubai - Drop Resume Yakho kuDaman.
Imisebenzi e-Dubai Holding
Ngokuvamile, i-Dubai Holding iyinkampani yokulondoloza utshalomali emhlabeni jikelele. Futhi enye yekampani enhle kakhulu eMpumalanga Ephakathi. Okwamanje inkampani ethuthukisa isisebenzi esisha ngasinye esizojoyina iqembu labo. Kuze kube manje, iDubai Holding yakhe amapaki ebhizinisi akhethekile e-UAE. Vele, inkampani kuthuthukisa imali emangalisayo futhi uphathe iphothifoliyo yezinkampani eziphezulu ezilinganiswe futhi ezaziwayo eMpumalanga Ephakathi futhi zigxile kakhulu emkhakheni wokutshala imali.
Definitely, when you research for jobs ungathola amathuba omsebenzi wezezimali nabo. Ngokubambisana nemakethe yezindawo zokuhlala kanye nebhizinisi lokungenisa izihambi i-Dubai Holding enikeza elinye lamathuba amahle kakhulu wemisebenzi. Ngokwesinye isandla, Abamele ukhetho kwezokuxhumana nabo bamukelekile ukujoyina Dubai Holding.
Ngaphezu kwakho konke ukuphathwa kwebhizinisi e-Dubai yasungulwa ku-2004. Ngokuvamile, ukuqoqa kudala imisebenzi emazweni we-12-14 futhi kusetshenziswa abantu abangaphezu kwe-25,000 e-United Arab Emirates. I-Dubai Holding iyinhlangano enkulu yokutshala izimali elawula i-16.8 Billion AED. Kuze kube sesikhathini samanje i-portfolio ye-130 yezimpahla eziphethwe ngabaphathi abakhulu. I-6.3 Billon AED inzuzo enetha.
Umsebenzi weHulumeni eDaily - Layisha i-Resume yakho e-Dubai ephethe.
Imisebenzi e-Dubai Internet City
I-Dubai Internet City iyaqhubeka nokushintsha amaphrojekthi amaningi e-United Arab Emirates. Ngokuvamile, i-Dubai Internet City isekela ukuphumelela kwebhizinisi kuwo wonke amazwe we-GCC. Ngokuhamba kwesikhathi, ipaki laseDubai Internet City liheha izinhlobo zotshalomali ezinhle kakhulu. Futhi njengendaba yezinkampani zaseFortune 500 izinkampani ngaphakathi eDubai City. Kuze kube sesikhathini samanje ukukhula kwamakhono endawo nokwakha iqembu elilawulayo le-Internet City yilokho okuchaza ukufuna ukuthola.
Nakuba lokhu kungaba yiqiniso i-Dubai Internet City. Unayo indawo engcono kakhulu yezidingo kanye nosomabhizinisi eDubai. Unalokhu engqondweni, inkampani idale amaza amakhulu alandelayo wokutshalwa kwehhotela. Futhi kuleli cala ukwenza okusha eDubai nase-Abu Dhabi kuyokwenza ukhule kulo lonke elaseMpumalanga Ephakathi especially on I-Expo 2020. Umsebenzi Kahulumeni E Dubai - Layisha Isicelo Sakho ku-Dubai Internet City.
Imisebenzi e-Dubai Knowledge Park
Kubalulekile ukuqaphela ukuthi iDubai Knowledge Park yindawo eyaziwayo yomhlaba wonke yebhizinisi. Most compelling evidence in the ukusesha umsebenzi. Is the company first and the only free zone dedicated to Human Resource Management for Dubai Internet business. To point out ukuthola inkontileka yokuqashwa kanye nezinkampani ezise Dubai I-Internet City. Ngaphansi kwalezi zimo ngamunye ngamunye wokufunda izwe elihle kakhulu e-Emirates.
Ngokujwayelekile, inkampani yayixhaswe e2003 njengengxenye ye-TECOM Group. Njengoba kukhonjisiwe ngenhla, iDubai Ulwazi Park inikeza ukuphathwa kwe ingqalasizinda yebhizinisi nelebhizinisi. Ngokunikezwe la maphuzu, inkampani ihambisana nemboni yezinhlangano ezintsha. Ngeziqondiso eziningi kakhulu futhi inethiwekhi yokusekelwa eyandisiwe ngaphakathi kweDubai City iyinhliziyo yebhizinisi.
IDubai Knowledge Park iyizinkampani ezihamba phambili phakathi kwezinkampani ezikleliswe phezulu i-Emirates. Ngakolunye uhlangothi, i-DKP ihlanganisa indawo yezinyawo eziyizigidi ezingama-1 ezilungele ukusetshenziselwa izinkampani ezintsha kanye nokuqalisa okusha. Yize lokhu kungaba yiqiniso le-95,2 lamamitha skwele webhizinisi elihlanzekile. Ngokwalesi sizathu, kunezinkampani eziningi ze-UAE ezimangalisayo eduze nePalm Jumeirah, iMall of the Emirates, Emirates Hills, neDubai Marina. Uma kunjalo, kukhona indlela engcono kakhulu ukulayisha kabusha kabusha amathuba omsebenzi omusha e Dubai. Umsebenzi Kahulumeni E Dubai - Layisha i-CV yakho ku-Dubai Knowledge Park.
Umsebenzi kuDaily Media City
I-Dubai Media City (DMC) ngokuvamile ikhuluma lenhlangano emangalisayo. I I-Dubai Media City yaxhaswa ngemali 2000. Ngaphansi kwalezi zimo, i-DMC yasungulwa ne-Emirates. Umbono oyinhloko ukuthuthukisa i-Dubai Media centre. Ukubeka ngenye indlela, inkampani efuna ochwepheshe bezokuxhumana. Abafuduka emhlabeni wonke abafuna umsebenzi e-Dubai. Ngenxa yalesi sizathu, inkampani yeDaily Media City iba ngcono kakhulu esifundeni saseMpumalanga Ephakathi.
The first thing to remember since DMC opening business. Whole Media ibhizinisi eDubai has evolved since 2000 as a thriving media community. This day’s Expo 2020 jobs are quite okubabazekayo ngeDubai Media City. Kumabhizinisi aseceleni omuhle ngokwesibonelo ama-Music Sectors. Ngaphezu kwalokho ngemisebenzi ye-New Media. Ngokubambisana nebhizinisi lokungcebeleka nokuzijabulisa eDubai. The career in Broadcasting is also available with film and information agencies. As a matter of fact, Dubai Media Ukuqasha now for marketing services executives.
Nakuba lokhu kungaba umsebenzi weqiniso e-Dubai Media City Amasevisi Ezamabhizinisi. Kuye kwadlula ukudala okuningi okunomthelela amaphrojekthi ongawajoyina nefoni yakho ephathekayo. Ngendlela efanayo, kufanele ukhuthaze i-CV yakho. Ngenxa yokuthi abaphathi abanekhono abanomsebenzi we-HR bazobheka imininingwane yakho yomsebenzi. Empeleni, Ukuhweba ngamabhizinisi esifundeni nakho kufanelekile uma ungathanda ukuqala ibhizinisi lakho. Ungasayiphathi izakhiwo eziyingqayizivele zeDaily Media City ezihloselwe abafuna umsebenzi omusha.
Umsebenzi weHulumeni e Dubai ne Dubai Dubai City.
Ukusebenza ne-Dubai World
Uma kwenzeka ungumuntu ongasebenzi. Inkampani ebambe umhlaba wonke, iDubai World indlela engcono yokuthola umsebenzi. Ukubeka elinye i-Dubai World ligxile kumuntu ngamunye omusha. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi izindawo zokukhulisa amasu eDubai zihlanganisa amathuba ezokuhamba nezokuhamba. Ikakhulu ungakwazi kalula ukuqala umsebenzi omusha ku-Drydocks & Maritime nale nkampani. Ngaphezu kwalokho, ukuzama ukuthola imisebenzi emihle kakhulu kunikezwa ngamaphrojekthi okuthuthukiswa emadolobheni njengabanjiniyela.
Emanzini amathuba okuqashwa kwamathuba okutshala izimali kanye nezinsizakalo zezezimali, izikhundla ezihlobene nazo kunzima kakhulu ukuthola. Ngenxa yokuthi i-Dubai World Interview isinzima kakhulu ukudlulisela izikhundla zezimali. Ngokuphawulekayo iphothifoliyo ye-Dubai World ikhula nsuku zonke. Umsebenzi kahulumeni kule nkampani kubandakanya ezinye zezinkampani ezihamba phambili zomhlaba ezimbonini zazo lapho ungathola khona ukunikezelwa komsebenzi. Ubufakazi obuningi obuqinekayo bokuthi i-Dubai World kufanelekile ukuzama iphothifoliyo eqinile. Ngokuvamile kufaka phakathi ukuqala noma ngisho nokukhomba kwabo ku-Linkedin kuhlakaniphile indlela yokuthola isabelo somsebenzi sezindleko zama Pakistani.
I-Dubai World iphumelele ngenqubo elinganisiwe yokuhlehlisa i-Dubai World Group. Ngesikhathi esifanayo, imisebenzi yayo eyinhloko ihle kakhulu kubazingeli bezemisebenzi. Ngokushesha izimali zenkampani e Dubai zizozivumela ukuba ziqhubekele phambili emakethe yamazwe ngamazwe kanye nebhizinisi lonke.
Umsebenzi Wezehulumeni eDaily - Layisha I-Resume Yakho e-Dubai World.
I-Dubai Airports Career
The future starts with Dubai Airport Career. Imisebenzi e-Dubai Airport is a indlela enhle yokwenza imali e-UAE. Kuze kube manje I-Dubai International Airport inamathuba emisebenzi kuwe. Ungaqala umsebenzi wokuba umshayeli we-uber or a sales executive. Or you can be a training umphathi and be promoted to the senior manager position. At this instant is Dubai Airport is a primary international airport serving Dubai City.
Sooner or later when you will be ehlala e Dubai you become the umsebenzisi oziqhenyayo ngemisebenzi yabo e-United Arab Emirates. Ngakho-ke ukuthola umsebenzi ngeDubai Airport kungabuye kube yitshe lakho. Kuze kube sikhathi samanje, kufanele uzame ukuba yilungu elizokhetha kulesi sikhumulo sezindiza esiphithizelayo emhlabeni. Ngezikhathi ezithile ungabhekana nabaphathi abadumile emalini yabo yabagibeli yaphesheya.
Ngaphambili Dubai World Central-Al Maktoum International Airport elinde wena. Iqiniso elimangalisayo lesikhumulo sezindiza i-Dubai International Airport. Ku isikhungo se-Emirates Business yisikhumulo sezindiza esiphambili kunazo zonke e-Asia. Kuze kube manje, isikhumulo sezindiza i-Dubai Airport sisebenzela abagibeli ngonyaka (85,654,250) njalo ngonyaka.
Umsebenzi weHulumeni eDaily - Layisha i-Resume yakho e-Dubai Airports.
Umnyango weDaily Land
Umnyango wezwe lase-Dubai wenza izwe lase-UAE ithuba lokuthola ibhizinisi. Kuzwelonke kazwelonke futhi Amazwe ase-Indian expats. Kwenziwa izimpahla nokuphila ngokufanele wonke umuntu. Lokhu kuvulwa kokunikezelwa koMnyango Wezomhlaba eDubai iminyango yabathengi bamazwe aphesheya. Kukhona isakhiwo sokwakhiwa ukuphathwa komhlaba iDubai. Le nkampani ye-Emirate ifinyelele emazingeni angakaze abe khona empumelelo yomsebenzi eDubai no-Abu Dhabi.
Ngaphandle kokulibala, wonke umzingeli wemisebenzi ovela eNdiya uzobusiswa nale nkampani. Abaholi abaphathi bafuna ukusebenza kanzima futhi abantu abazinikezele baseNingizimu Afrika. Ubani ongathanda ukujoyina le nkampani eneziMuslim? Kusukela ku-2000 abazingeli bamasha abasha abaza e-Dubai. Futhi lokho kuvumela i-Dubai Exats entsha ukufinyelela ezingeni eliphakeme lezemisebenzi e-Emirates.
NgoMnyango Wezomhlaba waseDubai ungathola izikhundla zokuthuthukisa iphrojekthi. Futhi ngemuva, ungathuthuka kakhulu kunokweqile. Ngokuhamba kwesikhathi inqubekela phambili yokuthuthukiswa komhlaba ezweni. Intando nakanjani dala okunikezwayo kwemisebenzi okuningi.
Umsebenzi Kahulumeni E Dubai - Layisha I-Resume Yakho Imisebenzi Kahulumeni.
Umsebenzi ku-Emirates Airline
Hlola amathuba nge-Emirates Group Careers. Ngaphansi kwalezo zimo, iqembu le-Emirates linikeza ezahlukene ezikhokhelwa kahle amathuba emisebenzi kanye nokuhamba-in interviews. Ngokuvamile, mayelana nomsebenzi njengoba kuphawuliwe i-Emirates Group ingekahulumeni waseDubai ngokuphelele. Njengendaba yeqiniso yokutshala imali yenhlangano ye IDubai ihlala ifuna abasebenzi abasha.
Ngakolunye uhlangothi, ngabe ufuna izinhloso zokujoyina iqembu labashayeli bazo. Kokuhlaziywa kokugcina ukuthola isikhundla sobunjiniyela kungukuhamba okuhle. Okwamanje at I-Emirates kuzwelonke ifuna imisebenzi enikezwayo. Umsebenzi we-Emirates Group ozinikele ekuqasheni nasekufundeni amakhanda ikakhulukazi kuzizwe ze-UAE. Noma kunjalo, uma ngabe ufuna umsebenzi womhlaba wonke ngaphandle kokulibala ulayishe isicelo sakho ku-Emirates.
Ngakolunye uhlangothi, kungukutshala imali kwesikhathi. Kwamadolobha angaphezu kwe-150 emazweni we-83 emazwenikazi ayisithupha. Ungaqiniseka thola umsebenzi ne-Emirates. Konke okudingeka ukwenze ukuphatha ukuxhumana nabaphathi be-HR bese ubakhulumela.
Ngenhloso ye ukuthuthukiswa kwamakhono kumuntu ngamunye ofuna umsebenzi. I-Emirates ihlala isiza ukukhulisa ibhizinisi ngendlela uHulumeni waseDubai ahlala eyakha. Ukubeka ngenye indlela, i-Emirates Airline imvelo ihlala ikhuthaza ukusebenzisana. Ukwethembeka eDubai Royal Familly kumele ube nakho uma usebenza nabo. Ngokubheka imininingwane nokuzibophezela entuthukweni yindlela yokusebenza ne-Emirates. Kufanele kukhunjulwe ukuthi kukhuphuka nenhlangano kuyindlela esheshayo nempumelelo.
I-Emirates National Oil Company
I-ENOC - Inkampani ye-Emirates National Amafutha inikezela uhla lwamathuba emisebenzi eDubai. Ngamanye amagama, uma ufuna uhla lwamakhampani ahlukahlukene anezimpahla eziqinile. I-Emirates Amafutha iyisinqumo esihle kunazo zonke futhi yayo babe nezakhiwo eziqinile zomsebenzi. Ukuthuthukiswa kwezimali zabantu kanye nenkampani ye-ENOC kuqwashisa abantu e-United Arab Emirates.
Ngale nhloso, i-Emirates National Amafutha Enhlangano iyinhlangano yomhlaba wonke yekhulu le-21st enezomnotho ezikhulayo. Ukuphakama kwakhe uSheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Ukweluleka komuntu siqu futhi ngezikhathi ezithile ngokuhambela ihhovisi eliyinhloko eDubai City.
I-Emirates iyaziqhenya ngayo imvelo yokusebenza yemvelo ehlukahlukene. Ngaphambili, bahlala bemukela ukuphuma okusha ku-ENOC. Inkampani ihlose uku khuthaza ubuciko bokulawulwa kwabasebenzi. Ukuphikisana nezinye izinkampani ukuqhubeka komsebenzi kuzo zonke izinkampani kuthatha isikhathi. Phezulu, uma le Enoc inokuqeqeshwa okuhle kokuphathwa kwethalente eDubai Center.
Umsebenzi Kahulumeni E Dubai - Layisha I-Resume Yakho ku-ENOC.
Imisebenzi e-Emirates Post
Ngasemuva i-Emirates Post ingesinye sezisebenzi ezisebenzayo zokuposa ze-United Arab Emirates. Ngasikhathi sinye, kuyingxenye ye-Emirates Government Group. Unalokhu engqondweni, kufanele wazi ukuthi ngokuvamile inkampani yethulwe ngo-Agasti 19, 1909. Ukubeka ngenye indlela, inkampani iqala ukuphathwa yi-Indian Post Office Services kuze kube yilapho izwe laseNdiya lizimela kwi1947. Inkampani inayo isiza esiyingqayizivele somsebenzi lapho ubhalisa khona. Ngasohlangothini oluhle, ungathola isexwayiso somsebenzi kubo.
Umsebenzi Kahulumeni E Dubai - Layisha I-Resume Yakho ku-Emirates Post Group.
Umsebenzi we-Etihad Airways e-Abu Dhabi
I-Etihad Airways emangalisayo iyinhloko yenkampani yenethiwekhi e-Abu Dhabi. Umsebenzi omuhle kakhulu we-Etihad Airways - kumele ukhunjulwe. Leyo nkampani yinkampani yesibili enkulu kunazo zonke e-UAE ngemuva nje kwe-Emirates Airline. Uma ungathanda ukuqala umsebenzi omusha futhi ehhotela nabo. Kufanele ufike ehhovisi elikhulu eKhalifa City, e-Abu Dhabi, eduze nase-Abu Dhabi International Airport. Kepha indlela engcono kunazo zonke ukubhalisa online noma thola umphathi wakwa-HR ku-Linkedin futhi uxhumane nabo.
Under those circumstances, Etihad started operations in November 2003. Since then they grow among the best companies in Abu Dhabi. To enumerate the airline is one of the best companies and operates more than 1,000 flights per week. Etihad Airways helping to cover 120 passenger and cargo destinations in the Middle East, Africa, Europe, Asia, Australia and the Americas continents.
Umsebenzi Kahulumeni E Dubai - Layisha I-Resume Yakho ku-ETIHAD.
Imisebenzi e-Fly Dubai
Another key company in the Airline industry is Fly Dubai. You can sign up for job alerts with Fly Inkampani yase Dubai. To say nothing of their talent Community in social media. If you are looking growing quickly within career levels. Try to apply with FlyDubai. And engeza imininingwane yakho yezexwayiso zomsebenzi eDubai ngisho nemisebenzi yezokuphepha. Ngasikhathi sinye, uzohlala wazi isiko laseDubai uma ujoyina inkampani. Ngaphezu kwakho konke, i-flydubai izoba nethuba elifanele kuwe. Akunandaba ukuthi ufuna siphi isikhundla. Le ndawo yomsebenzi ingakusiza. Ukuqashwa kwebhizinisi ku-HR, Ukukhangisa kanye nabasebenzi jikelele.
Ngalokhu engqondweni ukuvuselela kanye nokudala imisebenzi e-Abu Dhabi nase Dubai. Ukuphatha Imisebenzi ku-FlyDubai ukuhambisa ibhizinisi phambili. Ngendlela efanayo, inkampani iyaqaphela lokho expat abantu abavela eNdiya bayizisebenzi ezinhle. Futhi iYurophu ibaluleke kakhulu emisebenzini yokuthuthukiswa komsebenzi. Nakuba lokhu kungase kube yiqiniso ekufezeni amandla abo okugcwele ngaphakathi kwenkampani kuyisihluthulelo.
Umsebenzi Kahulumeni E Dubai - Layisha I-Resume Yakho ku-FlyDubai
I-Dubai International Airport - I-DXB Airport
The Dubai International Airport has now updated their website, you can have a look on their updated website. There you can find an interested guide for renting izimoto and booking hotels on over the Airport.
Amathuba emisebenzi nge-KIZAD
Amathuba amasha nge-KIZAD. Kukhona amaphrojekthi ambalwa ukuthi inkampani yaqala. Le nkampani igcina futhi ithuthukise indawo futhi amazwe angaphandle aphesheya aphesheya nge-Automotive experience. Eqinisweni, i-KIZAD izokwakhiwa amaphrojekthi amasha e-Abu Dhabi. Ukwakha umnotho wolwazi olusimeme. Nakuba lokhu kungase kwenzeke esikhathini eside. I-KIZAD umbono wenkampani uzokhiqiza futhi uthuthukise ibhizinisi lezokuncintisana emhlabeni jikelele ka-Abu Dhabi.
I-Kizad enikeza amathuba amahle kakhulu. Ikakhulu okusha okusha. Unalokhu engqondweni. Kufanele nakanjani ubacabangele. Umsebenzi weHulumeni e-Dubai. Layisha I-Resume Yakho ku-KIZAD.
Imisebenzi eDP World e-United Arab Emirates
Kanye nezinye izinkampani zohulumeni. I-DP World iyinhlangano ehamba phambili yokuguqula umdlalo emakethe yezohwebo yomhlaba jikelele. Ngaphezu kwalokho, le nkampani iyingxenye ebalulekile yokuhlinzeka ngezinkampani zokutshalwa kwezimali zikaHulumeni. Ukuze uyibeke ngenye indlela, vumela ukubeka kalula. Umsebenzi weDP wezwe uyamangalisa. Enye iphuzu eliyinhloko nale nkampani i indlela esheshayo yokuthola umsebenzi. Futhi enkampanini enhle ngaso sonke isikhathi uqiniseke ngaphakathi kwebhizinisi. Labo basebenzi bezimpahla baqhubeka behambisa abasebenzi abasha kuze kube sezingeni eliphezulu labaphathi.
Enye iphuzu eliyinhloko labantu abafuna umsebenzi ku-DP World. Abantu banezinto abazidingayo ukuze bathuthukiswe ngaphakathi kwenkampani. Ngalokhu engqondweni njengomsebenzi omusha we-Philipino, uzobe uphatha. Ngokuqinisekile iqhaza elibalulekile ekuxhumaneni komhlaba wonke ku-UAE. Kubalulekile ukuqaphela i-DP World isiza abasebenzi bayo ezomnotho ezikhulayo ngaphakathi kwezikhundla zikazwelonke.
Ngaphansi kwalezo zimo, kubalulekile ukuzama ukuthola umsebenzi nabo. Ngenxa yalesi sizathu, le nkampani idinga ukuphathwa okuhlakaniphile. Ngakolunye uhlangothi uyaziqhenya futhi unomdlandla ichitha isikhathi sonke ukusebenza kuwo wonke ama-United Arab Emirates. Ngakolunye uhlangothi, abantu abamesabi ujoyine i-Government Career e-Dubai. Ngaphezu kwalokho, Layisha I-Resume Yakho ngezansi.
Thumela ukubuyisela emsebenzini weHulumeni e-Dubai!
Ingabe ufuna ukuthola UJob e Dubai? nakuba lokhu kungaba yiqiniso singakusiza. Ngakolunye uhlangothi, kufanele ubuke nezinkampani zokuqasha zangasese. Ngoba kukhona imisebenzi eminingi kulowo mkhakha. Lapha sinakho Injini yokucinga yokusesha ephezulu e-Dubai futhi Iwebhusayithi yokuqashelwa emhlabeni wonke. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho. Futhi nje ushaye isicelo lapha. Kuzothatha imizuzu engaphansi kwemibili. Futhi angazi, lapho imisebenzi emisha ifika eGulf.
With Dubai City Company ungaqala umsebenzi omusha kuThe UAE!.
Layisha kabusha Emadolobheni Akhula Ngokushesha Kakhulu Emhlabeni! - Dubai City.